ရွှေတိဂုံ ဘုရား အား စောင့်ရှောက် သော နတ် နှင့် ဘီလူး များ အကြောင်း…. – GaMone Media
Homepage / Knowledge / ရွှေတိဂုံ ဘုရား အား စောင့်ရှောက် သော နတ် နှင့် ဘီလူး များ အကြောင်း….
ရွှေတိဂုံ ဘုရား အား စောင့်ရှောက် သော နတ် နှင့် ဘီလူး များ အကြောင်း….
By Ga MonePosted on April 6, 2021 April 6, 2021
ရွှေတိဂုံဘုရားသည် ဘုရား(၄)ဆူတို့၏ ဓာတ်တော်၊ မွေတော်များ ရှိပြီး လွန်စွာ တန်ခိုးကြီးလှ၏။ ရှေးခေတ်မင်း အဆက်ဆက်တို့ ကိုးကွယ်ခဲ့ကြပြီး အဖိုးမဖြတ်နိူင်သော ဌာပနာများကိုလည်း ထည့်သွင်း ခဲ့ကြလေသည်။တာဝတိ့သာနတ်ပြည်မှ သိကြားမင်းကိုယ်တိုင် ဦးစီးကာ နတ်အပေါင်းတို့ကို ရွှေတိဂုံဘုရား အား စောင့်ရှောက်စေရန် တာဝန် ပေးအပ်ထားလေသည်။ တာဝန်ပေးအပ်ထားသော နတ်များမှာ တာဝတိ့သာနတ်ပြည်မှ နတ်သား (၅)ပါးနှင့် စတုမဟာရာဇ်နတ်ပြည်မှ ဘီလူး အနွယ်ဝင် နတ်ဘီလူး (၁၆)ပါးတို့ကို တာဝန် ပေးအပ်ထားလေသည်။တာဝတိ့သာမှ နတ်သား (၅)ပါးအား ရွှေတိဂုံ၏ အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက် မုဒ်(၄)ခုတွင် နေရာချထား၊ စောင့်ကြပ်စေ၍ ကျန်(၁)ပါးအား ဘုရား၏ စိန်ဖူးတော်ထိပ်တွင် စောင့်ရှောက် စေလေ၏။
စိန်ဖူးတော်၏ ထိပ်တွင် စောင့်ရသောနတ်သည် အထက်ကောင်းကင်ယံမှ အညစ် အကြေးများ မကျစေရန် ဖယ်ရှားပေးရသည့်အပြင် စိန်ဖူးတော်နှင့် အဖိုးတန်ရတနာများကို မသမာသူတို့ ကြံစည်၍မရအောင် စောင့်ကြပ် ရလေသည်။မုဒ်(၄)ခုတွင် စောင့်ကြပ်ရသော နတ်(၄)ပါးသည်ကား မကောင်းမိစ္ဆာများနှင့် လူမိစ္ဆာတို့ ဘုရားအား လာရောက် မနှောက်ယှက်နိူင်ရန် စောင့်ကြပ်ရလေ၏။ ထို့အပြင် သဘာဝဘေးကြောင့် မပျက်စီးအောင်လည်း ကာကွယ် ပေးရလေ၏။နတ်ဘီလူး (၁၆)ပါးတို့သည်ကား ဘုရား၏ မြေအောက်ရှိ ဘုရားဌာပနာနှင့် မွေတော်၊ ဓာတ်တော်များကို အထူး စောင့်ကြပ်ရလေ၏။ ဘုရားဌာပနာအား ဖောက်ထွင်းရန် ကြံစည်သူတို့သည် ရောဂါအမျိုးမျိုး၊ ဘေးအမျိုးမျိုး၊ လက်နက်အမျိုးမျိုးဖြင့် သေပွဲ ဝင်ကြရလေ၏။
ထိုအပြင် ဘုရားရင်ပြင်ပေါ်ရှိ ဘုရားပိုင်ပစ္စည်းများကိုလည်း စောင့်ရှောက်ရလေ၏။ မြန်မာဘုရင်များလက်ထက်အခါက ပေါ်တူဂီစစ်သားတို့သည့် ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်ရှိ ခေါင်းလောင်းအား လုယူသယ်ဆောင်ကြသော်လည်း ဘုရားအောက်ပိုင်းရှိ မြစ်အတွင်းသို့ ရောက်သောအခါ ရေနစ်ပြီး အသေဆိုးဖြင့် သေကြ ရလေ၏။ထို့အတူ ဒုတိယ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်စစ်ပွဲ ပြီးခါစတွင် အင်္ဂလိပ်စစ်သားများက ရွှေတိဂုံဘုရားမြေအောက်ရှိ ဘုရားဌာပနာ မှ ရွှေ၊ ငွေ၊ ကျောက်သံ ပတ္တမြားတို့ကို တူးယူရန် အတွက် လူအင်အား အများအပြားသုံးပြီး လှိုင်ခေါင်းများစွာတူး၍ ရှာဖွေကြသော်လည်း မတွေ့ရပဲ အချိန်ကြာမြင့်လာသောအခါ အင်္ဂလိပ်စစ်သားများစွာတို့ အသေဆိုးဖြင့်သေကြရလေသည်။
ထိုအန္တရာယ်မျိုးစုံကြောင့် သိကြားမင်းသည် အလွန်ကြမ်းလှသော နတ်ဘီလူး (၁၆)ပါး ကိုသာ တာဝန်ပေးအပ်ကာ စောင့်ရှောက် ထားစေလေသည်။သိကြားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်လည်း သာသနာပြုမင်း ပေါ်သောအခါ ဘုရားထီးတော်တင်သည့်အချိန်တွင် ရွှေတိဂုံဘုရားအား လာရောက် ဖူးမြော်ဦးမည် ဖြစ်လေသည်။ထိုမင်းအတွက်အား ဆင်ဖြူတော်(၃)စီး ပေးအပ်မည် ဖြစ်လေသည်။ ထို့အတူ နဂါးမင်းများမှလည်း ဆင်ဖြူတော်(၄)စီး ထပ်မံ ဆက်သမည် ဖြစ်လေ၏။ဘုန်းတော်ကြီးသော ဘုရားရွှေတိဂုံသည် အဖိုးမဖြတ်နိူင်သော ဘုရား(၄)ဆူတို့၏ ဓာတ်တော်၊ မွေတော်များ ရှိခြင်း၊ တန်ဖိုးကြီးမားသော ရတနာများရှိခြင်း၊ လွန်စွာ ကြီးမြတ်ခြင်းတို့ကြောင့် နတ်နှင့် ဘီလူးတို့က အထူး စောင့် ကြပ် နေရလေ၏။
ေ႐ႊတိဂုံဘုရားသည္ ဘုရား(၄)ဆူတို႔၏ ဓာတ္ေတာ္၊ ေမြေတာ္မ်ား ရွိၿပီး လြန္စြာ တန္ခိုးႀကီးလွ၏။ ေရွးေခတ္မင္း အဆက္ဆက္တို႔ ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကၿပီး အဖိုးမျဖတ္ႏိူင္ေသာ ဌာပနာမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း ခဲ့ၾကေလသည္။တာဝတိ့သာနတ္ျပည္မွ သိၾကားမင္းကိုယ္တိုင္ ဦးစီးကာ နတ္အေပါင္းတို႔ကို ေ႐ႊတိဂုံဘုရား အား ေစာင့္ေရွာက္ေစရန္ တာဝန္ ေပးအပ္ထားေလသည္။ တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာ နတ္မ်ားမွာ တာဝတိ့သာနတ္ျပည္မွ နတ္သား (၅)ပါးႏွင့္ စတုမဟာရာဇ္နတ္ျပည္မွ ဘီလူး အႏြယ္ဝင္ နတ္ဘီလူး (၁၆)ပါးတို႔ကို တာဝန္ ေပးအပ္ထားေလသည္။တာဝတိ့သာမွ နတ္သား (၅)ပါးအား ေ႐ႊတိဂုံ၏ အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ မုဒ္(၄)ခုတြင္ ေနရာခ်ထား၊ ေစာင့္ၾကပ္ေစ၍ က်န္(၁)ပါးအား ဘုရား၏ စိန္ဖူးေတာ္ထိပ္တြင္ ေစာင့္ေရွာက္ ေစေလ၏။
စိန္ဖူးေတာ္၏ ထိပ္တြင္ ေစာင့္ရေသာနတ္သည္ အထက္ေကာင္းကင္ယံမွ အညစ္ အေၾကးမ်ား မက်ေစရန္ ဖယ္ရွားေပးရသည့္အျပင္ စိန္ဖူးေတာ္ႏွင့္ အဖိုးတန္ရတနာမ်ားကို မသမာသူတို႔ ႀကံစည္၍မရေအာင္ ေစာင့္ၾကပ္ ရေလသည္။မုဒ္(၄)ခုတြင္ ေစာင့္ၾကပ္ရေသာ နတ္(၄)ပါးသည္ကား မေကာင္းမိစာၦမ်ားႏွင့္ လူမိစာၦတို႔ ဘုရားအား လာေရာက္ မေႏွာက္ယွက္ႏိူင္ရန္ ေစာင့္ၾကပ္ရေလ၏။ ထို႔အျပင္ သဘာဝေဘးေၾကာင့္ မပ်က္စီးေအာင္လည္း ကာကြယ္ ေပးရေလ၏။နတ္ဘီလူး (၁၆)ပါးတို႔သည္ကား ဘုရား၏ ေျမေအာက္ရွိ ဘုရားဌာပနာႏွင့္ ေမြေတာ္၊ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကို အထူး ေစာင့္ၾကပ္ရေလ၏။ ဘုရားဌာပနာအား ေဖာက္ထြင္းရန္ ႀကံစည္သူတို႔သည္ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေဘးအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လက္နက္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေသပြဲ ဝင္ၾကရေလ၏။
ထိုအျပင္ ဘုရားရင္ျပင္ေပၚရွိ ဘုရားပိုင္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္ရေလ၏။ ျမန္မာဘုရင္မ်ားလက္ထက္အခါက ေပၚတူဂီစစ္သားတို႔သည့္ ေ႐ႊတိဂုံဘုရားေပၚရွိ ေခါင္းေလာင္းအား လုယူသယ္ေဆာင္ၾကေသာ္လည္း ဘုရားေအာက္ပိုင္းရွိ ျမစ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ေရနစ္ၿပီး အေသဆိုးျဖင့္ ေသၾက ရေလ၏။ထို႔အတူ ဒုတိယ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္စစ္ပြဲ ၿပီးခါစတြင္ အဂၤလိပ္စစ္သားမ်ားက ေ႐ႊတိဂုံဘုရားေျမေအာက္ရွိ ဘုရားဌာပနာ မွ ေ႐ႊ၊ ေငြ၊ ေက်ာက္သံ ပတၱျမားတို႔ကို တူးယူရန္ အတြက္ လူအင္အား အမ်ားအျပားသုံးၿပီး လႈိင္ေခါင္းမ်ားစြာတူး၍ ရွာေဖြၾကေသာ္လည္း မေတြ႕ရပဲ အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာေသာအခါ အဂၤလိပ္စစ္သားမ်ားစြာတို႔ အေသဆိုးျဖင့္ေသၾကရေလသည္။
ထိုအႏၲရာယ္မ်ိဳးစုံေၾကာင့္ သိၾကားမင္းသည္ အလြန္ၾကမ္းလွေသာ နတ္ဘီလူး (၁၆)ပါး ကိုသာ တာဝန္ေပးအပ္ကာ ေစာင့္ေရွာက္ ထားေစေလသည္။သိၾကားမင္းႀကီးကိုယ္တိုင္လည္း သာသနာျပဳမင္း ေပၚေသာအခါ ဘုရားထီးေတာ္တင္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေ႐ႊတိဂုံဘုရားအား လာေရာက္ ဖူးေျမာ္ဦးမည္ ျဖစ္ေလသည္။ထိုမင္းအတြက္အား ဆင္ျဖဴေတာ္(၃)စီး ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔အတူ နဂါးမင္းမ်ားမွလည္း ဆင္ျဖဴေတာ္(၄)စီး ထပ္မံ ဆက္သမည္ ျဖစ္ေလ၏။ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ဘုရားေ႐ႊတိဂုံသည္ အဖိုးမျဖတ္ႏိူင္ေသာ ဘုရား(၄)ဆူတို႔၏ ဓာတ္ေတာ္၊ ေမြေတာ္မ်ား ရွိျခင္း၊ တန္ဖိုးႀကီးမားေသာ ရတနာမ်ားရွိျခင္း၊ လြန္စြာ ႀကီးျမတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ နတ္ႏွင့္ ဘီလူးတို႔က အထူး ေစာင့္ ၾကပ္ ေနရေလ၏။
Previous post ပြည်သူ ထဲက ပြည်သူ တစ်ယောက် အနေ နဲ့ အားလုံး နဲ့ တစ်ဖက် တည်း ရှိခဲ့ လို့ ဝမ်းသာပါတယ် ဆိုတဲ့ အ ကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ မေ …..
Next post ဒီလိုကာလ မှာ ဆေးခန်းပြဖို့ ခက်ခဲ နေကြတဲ့ သွေးတိုး ၊ ဆီးချို လူနာတွေ ကို လမ်းပေါ် အရဲစွန့်ထွက်ပြီး ဆေးကုသပေး နေကြတဲ့ ဆရာဝန် တချို့